Australia oo dalkeeda ku soo rogtay xayiraad cusub oo la xiriirta corona virus…. | Radio Kaah
Australia oo dalkeeda ku soo rogtay xayiraad cusub oo la xiriirta corona virus….
Qiyaastii 2 milyan oo Australiyaan ah ayaa bilaabay maalintii ugu horreysay inay xeraan goobahoda ganacsi taas oo ay ku xirayaan coronavirus isniintii ka dib markii hal kiis laga helay bulshada ku nool magaalada Perth, caasimadda gobolka Western Australia, laakiin ilaa iyo hadda lama helin kiisas cusub.
Maamulka ayaa amar ku bixiyay in shan maalmood la xiro magaalada Perth ka dib markii waardiye ka tirsan hudheel loo isticmaali jiray in lagu karantiilo dadka ka soo laabanaya dibada la ogaaday inuu ku dhacay viruska.
Maamulka gobolka ayaa sheegay in 66 qof loo arkay inay xiriir dhow la leeyihiin ilaalada aan la aqoon oo midkoodna kuwii horey loo baaray uusan qabin. “Wadar ahaan 13 qof oo xiriir dhow leh ayaa hadda tijaabiyay taban waxaana 11-ka xiriir ee khatarta sare leh loo wareejiyay karantiil huteel si taxaddar dheeraad ah loo muujiyo,” ayuu yiri madaxa gobolka Western Australia Mark Gowan oo saxaafadda kula hadlay magaalada Pert ee dalkaasi.
Australia waxay ku guuleysatay inay si weyn u xakameyso cudurkeeda cusub oo xaddidaya kiisaska ku dhowaad 29,000 iyo dhimashada 909 – iyada oo nooca tallaabada go’aanka ah ee lagu arkay Perth, iyo xakamaynta xuduudaha. Olole tallaal ayaa bilaaban doona bishan, taas oo ra’iisul wasaare Scott Morrison uu sheegay inay ku kacayso ugu yaraan $ 6.3 bilyan .
Australia waxay horey u balan qaaday inay ku bixineyso A $ 4.4 billion si ay ugu hesho qiyaaso ku filan 26 milyan oo dadkeeda ah, laakiin Ra’isul wasaare Morrison wuxuu sheegay in dowladiisa ay u qoondeysay lacag dhan 1.9 bilyan oo doolar inay ku bixiso. Istaraatiijiyadda waxaa lagu taageeray qoondeyn bilow ah oo ku dhow $ 1.9 bilyan oo taageero cusub ah oo loogu talagalay soo-saaridda tallaalka.
Tani waxay dusha ka saaran tahay in ka badan $ 4.4 bilyan oo loo qoondeeyay iibsiyada tallaallada, ”ayuu Morrison ku yiri hadal uu jeediyay. RW Morrison oo u kala saarayay barnaamijka talaalka in uu yahay “ahmiyadiisa koowaad” Australia waxay ku yaboohday in ka badan A $ 250 bilyan oo dhiirrigelin ah, taas oo durbadiiba bilowday inay wax ka qabato.
Laakiin Morrison wuxuu yiri waxaa jira xadidaadda taageerada dowladda ay awoodi karto.
Previous Article Milateriga Mnyamar oo la wareegay Awoodda Dalkaasi.
Next Article DHAGAYSO:C/rashiid Janan oo qiray in askar looga qabtay dagaalki beled-xaawo.